Stranger Things နဲ့ Star Wars တို့အတွက် Google Pixel 2/2XL Camera တို့မှာထွက်ရှိထားတယ့် AR Stickers! – AsiaApps
Google Pixel2နဲ့ Pixel2XL Camera မှာ Stranger Things နဲ့ Star Wars တို့အတွက် AR(Augmented Reality) Stickers တွေထွက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအကြောင်းကိုတော့ Google ကကျင်းပတဲ့ အောက်တိုဘာ ၄ ရက်နေ့ Hardware Event မှာဖော်ပြလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ AR Technology Sticker တွေဖြစ်တာကြောင့် Fan တွေကိုတကယ်အားရစေမှာပါ။
Stranger Things ထဲက Character တွေ၊ အကောင်ကြီးတွေကိုတွေ့မြင်ရမှာ ဖြစ်သလို Star War : The Last Jedi ထဲက Spaceship တွေ၊ Lightsaber တွေနဲ့လည်းထိတွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ The Last Jedi လည်းမကြာခင်ထွက်ရှိတော့မှာဖြစ်တာကြောင့် ဒီ AR Sticker လေးတွေကို ကလိရင်း Mood သွင်းလို့ရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။
အကယ်၍မိတ်ဆွေရဲ့ ဖုန်းထဲမှာ Google Pixel2Camera ရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ New Version ကို Update လုပ်ရုံနဲ့ AR Sticker တွေကို ထိတွေ့ခံစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ Download အရင်လုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ AR Sticker တင်ရှိနေတာမဟုတ်ပဲ ပုံမှန် Camera ထက်ကောင်းတဲ့ အခြား Features တွေလည်းရှိနေတာကြောင့် မိတ်ဆွေအတွက်အကျိုးယုတ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
Download ရမယ့်ပုံစံနည်းနည်းလည်နေရင် အောက်က Video ကိုကြည့်လိုက်ပါ!
Source : 9T5